Zimbabwe set to hold polls on July 30
Published: May 30, 2018 15:05:31 | Updated: June 02, 2018 17:06:16
Mnangagwa, who became president following the military take-over, has promised to deliver on free and fair elections to win over Zimbabwe’s critics at home and abroad, according to the Reuters.
Missing from the July ballot for the first time in 20 years will be Zimbabwe’s foremost political gladiators, Mugabe and Morgan Tsvangirai, the former opposition Movement for Democratic Change (MDC) leader, who died from cancer in February.
Nicknamed ‘Crocodile’ for his secretive and insular demeanour before taking office, Mnangagwa goes into the election with the advantage of incumbency.
He has promised to break with Mugabe’s policies and says Zimbabwe is opening up to foreign investors.
Mnangagwa has officially applied for Zimbabwe to re-join the Commonwealth it left in 2003 under Mugabe and has invited the grouping of former British colonies to send observers to its elections.
The Commonwealth suspended Zimbabwe over accusations of having flawed elections in 2002.